Degitaanka BOEING 737 MAX: Boeing waxay soo saartay diyaarad aan ammaan ahayn
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Degitaanka BOEING 737 MAX: Boeing waxay soo saartay diyaarad aan ammaan ahayn
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Itoobiya • Indho Indho Indoneesiya • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Guddiga Guriga ee Mareykanka ee Gaadiidka ayaa weydiistay Boeing 787 iyo 737 MAX soo saarista dukumiintiyada
Dejinta Boeing waxay aqbashaa mas'uuliyadda kaliya ee shilalka 737 MAX, waxay ku guulaysataa heshiis ka fogaanaya waxyeelada ciqaabta.
Xuquuqda waraaqaha waxay u maleeyaan in tani aysan ku filneyn oo ay sheegeen inay sii wadi karaan dagaalka.
Boeing waxay aqbashay mas'uuliyadda kaliya ee shilalka 737 MAX, waxay ku guulaysataa heshiis ka fogaanaya waxyeelada ciqaabta.
Qareennada Boeing ayaa Arbacadii gudbiyay mooshin wadajir ah qareennada qoysaska 157 qof ee ku dhintay shilkii 737 MAX ee Itoobiya, iyaga oo aqbalay mas'uuliyadda kaliya ee shilka dhimashada iyo dejinta hab lagu xallinayo ku dhawaad ​​dhammaan sheegashooyinka.
Heshiiska kiiska madaniga ah ee ka tanaasulida daahfurka ayaa dhigaya FlyersRights.org dacwada mid ka mid ah siyaabaha kaliya ee La Xisaabtanka iyo Xaqiiqada ku saabsan shilalka MAX lagu gaari karo, iyo sidoo kale Badbaadada mustaqbalka si looga hortago dhimashada la iska ilaalin karo oo ay sababto habacsanaan, karti la'aan ama go'aan qaadashada badbaadada musuqmaasuqa.
Siyaabaha kale waa muujinta sirta, baarista dembiyada iyo dacwadaha, baaritaannada Kongareeska iyadoo la adeegsanayo awoodaha amar maxkamadeed, iyo wax ka beddelka Xeerka Xoriyadda Macluumaadka.
The FAA waa la khiyaameeyay cadee diyaaradda.
Go'aanka Maxkamadda Sare ee 2019 ee loo yaqaan 'Argus Leader' wuxuu u oggolaanayaa shirkadaha sharciyeysan sida Boeing iyo hay'adaha amniga federaalka sida FAA inay ku ilaashadaan go'aan gaarista ammaankooda sirta ah oo ay ka difaacaan khabiir kasta oo badbaado madax-bannaan ama baaris dadweyne.
"Eedaysanaha, Boeing, wuxuu qirtay in ay soo saartay diyaarad xaalad aan ammaan ahayn oo sabab u ahayd dhaawaca magdhowga ee dacwoodaha ee uu sababay shilkii diyaaradda Ethiopian Airlines Flight 302," ayaa lagu sheegay warbixinta.
Boeing waxay si cad u ogolaatay in duuliyayaasha aysan khalad lahayn.
Waxa kale oo ay meesha ka saartay laba alaab-qeybiyeyaal MAX: shirkaddii dhistay xagasha weerarka jet-ka iyo tii soo saartay, sifada Boeing, software-ka diyaaradda ee cilladda ku jirta.
Mooshinka waxaa ku jira waxa loogu yeero shuruud — heshiis ku saabsan habka xallinta - kaas oo ay wada saxiixeen laba qoys mooyee.
Shuruucda waxaa loola jeedaa magdhowga magdhowga sheegasho kasta waxaa lagu go'aamin doonaa dhexdhexaadin ama maxkamad ku taal Illinois, halkaas oo Boeing ay xarunteedu tahay. Boeing waxay ogolaatay in aysan isku dayin in ay ku qasabto qoysaska dibadaha, qaar badan oo ka mid ah Afrika, si ay magdhow uga raadsadaan dalalkooda, halkaas oo khasaaruhu aad uga yar yahay.
Bayaan ay soo saartay Arbacadii, Boeing wuxuu ku sheegay in heshiisku "u ogolaanayaa dhinacyada inay diiradda saaraan dadaalkooda go'aaminta magdhowga habboon ee qoys kasta."
"Boeing waxaa ka go'an in ay hubiso in dhammaan qoysaska eheladooda ku waayey shilalka si buuxda oo cadaalad ah loo magdhabo khasaarahooda," ayaa lagu daray bayaanka.
Waxa Boeing ay ka hesho heshiiska waa ka-reebis cad oo ah wax kasta oo sheegasho ah magdhawga ciqaabta iyo joojinta hababka sahaminta sharciga ama kaydinta kuwaas oo raadin doona caddayn dheeraad ah oo khalad ah oo ay samaysay Boeing.
"Xeerbeegtiyadu ma dhageysan doonaan caddaynta arrimaha mas'uuliyadda," waxaa dhigaya sharciga. "Dhinacyadu waxay sidoo kale isku raaceen in wax caddayn ah ama dood ah oo ku saabsan magdhawga ciqaabta aan si sax ah loo noqon doonin mawduuca daahfurka ama aan la aqbalin."
Ralph Nader, u doodaha macaamiisha muddada dheer caan ku ahaa adeegsiga sharciga ciqaabta si ay ula xisaabtamaan shirkadaha, ayaa ugu yeeray "dejin la yaab leh iyada oo Boeing aysan dammaanad qaadin wax kasta oo dollar ah."
Aqbalaadda Boeing ee mas’uuliyadda waa tii ugu dhoweyd ee ay si buuxda u qirato eeda labadii shil ee dilaaga ahaa ee MAX ee ay ku dhinteen 346 qof: Lion Air Flight JT 610 ee Indonesia sanadkii 2018, oo ay ku xigto afar bilood ka dib shilkii ka dhacay Itoobiya.
Si kastaba ha ahaatee, weli way ka gaabsan tahay in si sax ah loo sheego adduunka waxa ka khaldamay naqshadaynta iyo caddaynta MAX, sida uu u dhacay iyo cidda ka masuulka ah.
Waxa sababay shilalka MAX-daba waxa ay ahayd hawl-gelinta khaldan ee software-ka cusub ee kontoroolka duulimaadka ee jetka - Nidaamka Kordhinta Sifooyinka Maneuvering, ama MCAS - kaas oo labada diyaaradood ku qasbay sanka.
Hase yeeshee shirkaddu waligeed si cad uma aqbalin in naqshadda MCAS ay si qoto dheer u cilladaysan tahay sida la caddeeyay, marka laga reebo in la yiraahdo waa naqshadeynta iyo tijaabinta waa in ay xisaabta ku dartaa xirfadaha caadiga ah ee duuliyaha iyo waqtiga falcelinta duuliyaha - qaabeyn tilmaamaya xoogaa eedda duuliyeyaasha.
Boeing waxay ku sheegaysaa xereynta inaysan "eedayn duuliyaha (Kabtanka), Co-Pilot (Sarkaalka koowaad) ama aysan raadin wax ku biirin ama dayacaad isbarbardhig ah iyaga."
Heshiisku wuxuu dhigayaa in qareennada qoysaska loo ogolaan doono inay isticmaalaan sahan sharci ah si ay u helaan waxyaabaha ay ka midka yihiin xogta duubayaasha duulimaadka. Taasi waxay u ogolaan doontaa inay abuuraan animation muujinaya wixii rakaabka la kulmay lixdii daqiiqo ee duulimaadka si ay u muujiyaan argagaxa iyo dhibaatada kuwii dhintay.
Kharashka maaliyadeed ee ugu dambeeya ee Boeing lama go'aamin doono bilo badan. Si kastaba ha ahaatee, xudduudaha uu heshiisku dhigayo sheegashooyinka ayaa meesha ka saaraya hubanti la'aanta shirkadda.
Iyada oo ay suurtogal tahay in sifo kale oo khalad ah lagu muujiyo dacwadaha maxkamadda hadda fog, madaxda Boeing waxay u dhaafi karaan qareennada si ay uga shaqeeyaan qaddarka saxda ah ee magdhowga inta ay sii socdaan.